Global Voices teny Malagasy » Nanatanteraka ny diabe fanao isan-taona ho an’ny Tompon’ny Fahagagana i Pero · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2012 3:39 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela García Calderón Nandika Lila
Sokajy: Amerika Latina, Però, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Tantara
Isaky ny volana oktobra, ao an-drenivohitr'i Però – Lima – no ahitana loko volomparasy, arahan'ny sarin'ilay Tompon'ny fahagagana  izay ankalazaina amin'ny alàlan'ny diabe ny 18, 19 ary 28 oktobra. Mandray anjara amin'izany diabe izany avokoa ny olona rehetra avy amin'ny foko sy saranga samihafa.
Tokony ho tamin'ny taona 1651, nivondrona ny andevo mainty hoditra avy any Angola ary nanangana toerana iray hifandraisan'izy ireo tao Pachacamilla, miala kely an'i Lima . Teo amin'ny rindrina anankiray tamin'izany toerana izany no nanaovan'ny andevo iray tsy fantatra anarana ny sarin'i Kristy  voahombo teo amin'ny hazo fijaliana. Notanterahany tamin'ny alalan'ny haben'ny finoany io sary nataony io.
Efatra taona taty aoriana, tamin'ny taona 1655, nisy horohorontany namely an'i Lima sy ny tanàna manakaiky azy atao hoe Callao . Maro ny trano nianjera tamin'izany, ary anisan'ireny ny rindrina tao amin'ny tanànan'ny firahalahiana tao Pachacamilla – afa-tsy ilay rindrina nisy ny sarin'i Kristy voahombo ihany no mbola niloko tsara.
Tamin'ny oktobra 1687, nisy horohorontany mahery indray namely an'i Lima sy Callao, ary anisan'ny nianjera ilay rindrina nisy ny sarin'i Kristy. Kanefa mafy be ilay sary ka tsy potika. Nolokoina tamin'ny loko menaka ilay izy avy eo, ary nolanjaina manerana an'i Pachacamilla natao tao anaty filanjana ka nivavahan'ny olona sy nanolorany tena.
Nonomboka hatreo, isaky ny volana oktobra dia entina manodidina ny tanàna tahaka izany foana ny sarin'ilay Tompon'ny Fahagagana, arahan'ireo mpino aman'arivony maro. Manao akanjo volomparasy ny vehivavy asiana fehikobo fotsy, ary manao fehitenda volomparasy kosa ny lehilahy.
Lanjain'ireo mpikambana ao anatin'ny Firahalahiana ho an'ny Tompon'ny Fahagagana ny filanjana misy ilay sary, milanja azy koa ny relijiozy ahitana mpikamnana eo ho eo amin'ny 5 000 eo izay mizara amin'ny toby 20, ireo rahalahy hajaina rehetra, ary mpihira roa : cantoras sy sahumadoras (antokompihira vehivavy sy ireo mpandoro menaka manitra). Olona manokana tendren'ny arisevekan'i Lima no mpitarika azy ireo.
Ireo Sahumadoras nizotra tamin'ny Diabe. Saripikan'ilay mpandray anjaran'i Global Voices Isabel Guerra , nahazoana alalana.
Tahaka ny mahazatra dia nanaraka ny diabe koa ireo bilaogera sy mpampiasa twitter marobe.
Ny bilaogy Historia y fotos  [es] mamerina ny tantaran'ilay sary ary mizara amintsika ny zavatra nitranga rehetra manodidina izany sary izany:
Tamin'ny 6-12 septambra tamin'ity taona ity dia nisy vaomiera tonga tany amin'ny toerana manatantara Pachacamilla, anisan'ireny ny mpandoko iray izay nanankina ny tohatra fiasany teo ampototry ny rindrina ary saika handoko ilay sary. Torana teo anefa izy ary nifamonjena tsy hianjera. Avy eo dia niezaka nandoko indray izy saingy lasa nalemy ary tsy nety namerina nanandrana fanintelony intsony izy avy eo.
Nisy mpanangatrano hafa koa nanandrana tahaka izany fa lasa nalemy koa izy. Tsy nisy olona sahy nanandrana intsony avy eo. Avy eo nanjombona tampoka ny lanitra ary avy be ny orana, ary tsy mbola nisy tahaka izany tany Lima. Mpino maro no nilaza fa famantarana avy amin'Andriamanitra ireo zava-nitranga ireo, tsy tiany hofafana ilay sary.
Marihina fa tsy misy oram-be izany any Lima fa erika fotsiny ary mitsahatra izany rehefa afaka ora maromaro.
Ny bilaogy Universidad 21  [es] mampilaza ny antsipirian'ny làlana rehetra holalovan'ny diabe ao Lima, miaraka amin'ny sarintany.
Hita saika manerana ny firenena rehetra io hafanampo io, tahaka ny hita ao Tacna. Ny bilaogy Tacnesos mizara ny vaovao rehetra mandritra ny diabe:
Volana oktobra, volana volomparasy. Tahaka ny isan-taona, mpino aman-jatony maro no manaraka ny diabe miaraka amin'ny sarin'ny Tompon'ny Fahagagana. Sarin'ny Tompon'ny Fahagagana natao tao an-tanànan'i Tacna ny 18 sy 28 oktobra.
Mikambana ao amin'ny Mpianadahin'ny Tompon'ny Fahagagana. Saripikan'ny mpandray anjara ato amin'ny Global Voices Isabel Guerra , nahazoana alalana.
Mandritra izany rehetra izany dia manana ny heviny ny mpisera twitter .
Ilay mpilalao sary mihetsika Jesús Neyra  (@Jesusneyra ) [es] mametraka fanontaniana:
@Jesusneyra : Señor de los milagros q recorres nuestras calles 🙂 # mesmorado  #espiritumorado  mi deseo te lo mando ya?
@Jesusneyra : Tompon'ny Fahagagana mamakivaky ny tanànany 🙂 #mesmorado  [volana volomparasy] #espiritumorado  [fanahy volomparasy] hamboraka ny faniriako aminao ve aho?
Ary Karen Ruiz (‏ @karen_rfer ) [es] manontany azy:
@karen_rfer : @Jesusneyra  misy diabe tahaka izao ve any Etazonia? Aty Buenos Aires misy. Miaraka amin'ny fianakaviako aho isan-taona. Tsy mitovy amin'ny any Pero fa mahafinaritra koa.
Juanpi Pozú Pflucker (@juanpipp ) [es] nandefa sary ho an'i Jesús Neyra:
@juanpipp : @Jesusneyra  ho anao ry rahalahiko, nalaiko vao haingana iny… ho anao anie ny tsara indrindra sy ny betsaka indrindra! pic.twitter.com/lEpUFMYu 
Ny fahitalavitra AmericaNoticias.pe (@NoticiAmerica ) [es] mizara sary mihetsika ary mitonona manokana ny filoha Ollanta Humala:
@NoticiaAmerica :[VIDEO] Ollanta Humala nohobian'ny olona nandritra ny diabe ho an'ny Tompon'ny Fahagagana http://goo.gl/rygsN 
Viajaporperu Indira (@viajaporperu ) [es] naneho ny hagagany:
@viajaporperu : Tsy fantatro fa hay hankalazaina any amin'ny firenena 260 ity diabe ho an'ny Tompon'ny Fahagagana ity!!! http://bit.ly/QJOUbe 
Hanamarinana izany indrindra, avy any Santiago any Chili, Marion Duarte (@marionfernanda ) [es] nandefa sary sady nanoratra:
@marionfernanda : Diabe ho an'ny Tompon'ny Fahagagana nandalo an'i Paragoay. nico_brown  pic.twitter.com/zSsUKk5F 
Adrián (@sspxs ) [es], avy any Mexico, nandefa sary koa:
@sspxs : Diabe ho an'i Tompon'ny Fahagagana (@ Plaza de la Constitución  (Zócalo) miaraka amin'ny 23 hafa) [pic]: http://4sq.com/TJOy5j 
Humbero Meneses (@elyuka ) [es] manoratra mikasika ilay sary nandalo teo akaikin'ny tranony:
@elyuka : Anio, nandalo teo anoloan'ny varavarako ny Tompon'ny Fahagagana. Azoko lazaina fa tena tsara lavitra mihoatra ny noely izany.
Vinavinaina hatao amin'ny 1 novambra manomboka amin'ny 11 ora sy sasany ny diabe famaranana. Ilay tena sarin'ny Tompon'ny Fahagagana, ilay nataon'ilay andevo Angoley, dia tehirizina ao amin'ny fiangonan'ny nazareana ao ambanivohitr'i Lima, ary afaka handehanan'ny olona rehetra any amin'ny fotoana rehetra, raha te hanao fanatitra sy hitsaoka azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/10/26/39417/
 Tompon'ny fahagagana: http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_Miracles